Isiguquli yokuTshintsha Oli lokucoca ulwelo kwaye Ulondolozo - Airpull (Shanghai) Filter Co., Ltd
Uthuli eziqulathwe emoyeni wendele ziya wahlala emoyeni lokucoca ulwelo. Ukuthintela Screw isiguquli ekubeni abraded okanye umahluli oyile umoya ekubeni uvalwe, element filter ofuna ukucocwa okanye indawo emva kokuba sele esisetyenziselwe 500hours. In bume yesicelo apho uthuli enzima ikhona, kufuneka ucuthe umjikelo replacement. Misa i umatshini phambi kokuba replacement lokucoca ulwelo. Ngenjongo zokunciphisa ixesha stop, icebo lokucoca ulwelo elitsha okanye lokucoca lolaleliso acoca kuyacetyiswa.
1. Ukuxhasa kancinane ulawulo ibhokisi zombini iziphelo lokucoca ngokuchasene kwindawo tyaba, khon 'ukuze bahlukane kuninzi enzima, uthuli owomileyo.
2. Sebenzisa umoya owomileyo engaphantsi 0.28Mpa ukuba kukubasela ulwalathiso welori lomoya. Umgama phakathi amanzi esatsiba kunye iphepha elisongiweyo kufuneka ubuncinane 25mm. Kwaye usebenzise amanzi esatsiba ukuqhushumba wehla kunye ukuphakama.
3. Emva kokuhlola, kufuneka ulahle i element filter inazo naziphi na emingxunyeni, umonakalo, okanye aselula.
1. ujije le oil filter isiguquli, kwaye ulahle ngayo.
2. Coca ngenyameko iqokobhe lokucoca ulwelo.
3. Hlola ukusebenza kweyunithi umahluko yomthumeli xi.
4. kuthambisa lokucoca uphawu gasket ngeoli.
5. Screw element filter ukuya gasket uphawu, uze usebenzise isandla sakho ukuba ngophawu ngqongqo kakhulu.
6. Tshekisha ukuba kukho na ukuvuza xa sele uqalisile lo matshini. Attention: Kuphela xa isiguquli sele wayeka kwaye akukho uxinzelelo kwinkqubo, ukuba ungakwazi esikhundleni element filter. Ukongeza, ukuphepha ukwenzakala abilayo ebangelwe ioli eshushu.